चेक बिना बैंकहरुले कसरी गर्छन् सुरक्षित भुक्तानी ? यस्तो छ प्रक्रिया – Clickmandu
दिलु कार्की २०७६ भदौ २९ गते १६:४९ मा प्रकाशित
काठमाडौं । अब चेक नकाटी एक बैंकबाट बैंकमा भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले रियल टाइम ग्रु सेटलमेन्ट (आरटीजीएस) सिस्टम लागू गरेसँगै चेक काट्नुपर्ने युगको अन्त्य भएको हो ।
आरटीजीएस प्रणाली लागू भएसँगै भुक्तानी व्यवस्थामा नयाँ युगको शुरुवात भएको राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपालले बताए । राष्ट्र बैंकले आइतबारदेखि आरटीजीएस प्रणालीको औपचारिक शुभारम्भ गरेको छ ।
युके एड बेलायतको प्रावधिक तथा आर्थिक सहयोगमा नेपालमा आरटीजीएस प्रणाली सुरुवात गरिएको हो ।
‘आरटीजीएस प्रणाली लागू भएसँगै भुक्तानी व्यवस्थामा नयाँ युगको शुरुवात भएको छ,’ गभर्नर डा. नेपालले भने, ‘यो प्रणालीमा हरेक कारोबार छिटो, प्रष्ट र सुरक्षित हुन्छ ।’
त्यतिमात्रै होइन, बैंकमा एउटा फर्म भरेर भुक्तानीको आदेश दिनेवित्तिकै अर्को बैंकमा रहेको व्यक्ति वा संस्थाको खातामा रकम जम्मा भइहाल्छ ।
गभर्नर डा. नेपालले माछापुच्छ्रे बैंकबाट नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा बिनाचेक २० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेर आरटीजीएस प्रणालीको शुरुवात गरे । माछापुच्छ्रे र इन्भेष्टमेन्ट बैंकले आरटीजीएस प्रणालीको पहिलो कारोबार गरेका थिए ।
यो प्रणाली लागु भएपछि २ लाख रुपैयाँभन्दा माथिको भुक्तानी दिँदा चेक नचाहिने भएको छ । राष्ट्र बैंकले तत्काललाई २ लाख रुपैयाँभन्दा माथि २० लाखसम्मको भुक्तानी स्वेच्छाले र २० लाखभन्दा माथि अनिवार्य आरटीजीएस प्रणालीबाट भुक्तानी गर्न सकिने व्यवसथा गरेको छ ।
तत्कालमा सबै चेक भुक्तानी प्रणाली हटाउन सम्भव नभएको राष्ट्र बैंकले हाल भुक्तानी रकमको सीमा तोकेको हो ।
आरटीजीएस प्रणालीबाट भुक्तानी गर्दा चेक भुक्तानीमा भन्दा सस्तो शुल्क हुने राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक बमबहादुर मिश्रले बताए ।
‘चेकमा भुक्तानी गर्दा भन्दा आरटीजीएस प्रणालीमा सस्तो शुल्क र छिटो हुने भएकाले सर्वसाधारणमा यसप्रति आकर्षण बढ्छ’ मिश्रले क्लिकमाण्डूसँग भने ।
आरटीजीएस पुल नभएर पुस पेमेन्ट सिस्टम हो । यसमा कुनै पनि व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई पैसा भुक्तानी गर्नु परेमा आरटीजीएसमा आवद्ध सम्बन्धीत बैकमा गएर लिखित निर्देशन दिएपछि त्यो व्यक्तिको खाताबाट अर्को व्यक्तिको खातामा रकम भुक्तानी हुनेछ ।
यस्तो छ भुक्तानी प्रक्रिया
भुक्तानी गर्ने व्यक्ति र भुक्तानी लिने दुवैको आरटीजीएसमा आवद्ध बैंकमा खाता हुनुपर्ने छ।
भुक्तानी गर्ने व्यक्तिले आवश्यक सम्पुर्ण प्रक्रिया पुर्याइसकेको २ मिनेट देखी २० मिनेटसम्ममा सम्बन्धीत व्यक्तिको खातामा रमक भुक्तानी हुनेछ ।
सम्बन्धीत बैंकमा यसरी गरिएको कारोबारको विस्तृत विवरण राष्ट्र बैकमा तुरुत्तै हुने मिश्र बताउँछन् । आरटीजीएस प्रणालीबाट भुक्तानी गर्दा बैंकमा नै गएर लिखित विवरण पेस गरि कारोबार गर्दा कुनै पनि जोखिम नहुने र मोवाइल एपमार्फत भुक्तानीको आदेश दिँदा जोखिम हुने राष्ट्र बैंक मिश्र बताउँछन् ।
यसअघि बैंकहरुले अन्तर बैंक कारोबारमा स्वीफ्ट प्रणाली मार्फत गर्दै आएका थिए । यस प्रणालीमा सेवा शुल्क डलरमा भुक्तानी गर्नु पर्दथ्यो । तर आरटीजीएस प्रणालीमा कारोबार गर्दा भने त्यो झन्झट हटेको छ ।
आरटीजीएसको फाइदा मुख्य भनेको नै चेक नकाटी भुक्तानी गर्न सकिने हो । चेक नै नकाटी भुक्तानी गर्न सकिने हुँदा यो प्रणाली सुरक्षित, विश्वसनिय, छिटो र बैंकहरुमा कम जनशक्ति र थोरै खर्चमा काम सम्पन्न हुन्छ ।